ကျေးဇူးတော်နှင့်မျှော်လင့်ချက် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2022-01 > ကျေးဇူးတော်နှင့်မျှော်လင့်ချက်
Les Miserables (The Wretched) ဇာတ်လမ်းတွင် Jean Valjean သည် ထောင်မှလွတ်လာပြီးနောက် ဘုန်းတော်ကြီး၏နေအိမ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ ညစာနှင့် တစ်ခန်းစီပေးသည်။ ထိုညတွင် Valjean သည် ငွေထည်အချို့ကို ခိုးယူထွက်ပြေးသော်လည်း ခိုးယူထားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဘုန်းတော်ကြီးထံ ပြန်ပို့သော ရဲများက ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်။ ဂျင်းကို စွပ်စွဲမည့်အစား ဘုန်းတော်ကြီးက ငွေမီးခုံနှစ်ချောင်းကို ပေးကာ ပစ္စည်းများကို ပေးသည်ဟု အထင်ကြီးစေသည်။
သူ့ညီမ၏ကလေးများကို ကျွေးမွေးရန်အတွက် မုန့်ခိုးယူမှုဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသော တင်းမာပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော Jean Valjean သည် ဘုန်းတော်ကြီး၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် မတူညီသောလူတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထောင်ထဲပြန်ပို့မယ့်အစား ရိုးသားတဲ့ဘဝကို စတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူရဲ့ ဘဝနေထိုင်မယ့်အစား အခု သူ့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးနေပါပြီ။ ဤသည်မှာ အမှောင်ကမ္ဘာသို့ ဆောင်ကြဉ်းပေးရမည့် သတင်းစကား မဟုတ်ပါလား။ သက်သာလောနိတ်မြို့ရှိ အသင်းတော်ထံ ပေါလုဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့ကိုချစ်၍ ထာဝရနှစ်သိမ့်မှုနှင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထာဝရချမ်းသာပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို နှစ်သိမ့်စေ၍ ကောင်းသောအလုပ်၌ ခိုင်ခံ့စေခြင်းငှာ၊ စကားလုံး "(2. သက် 2,16-17) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်၏အရင်းအမြစ်ကား မည်သူနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအားပေးမှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်ကောင်းများကို ပေးဆောင်တော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားဖြစ်ပါသည်- "ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော် ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းတော်မူပါ၊၊ ကြီးစွာသောကရုဏာတော်နှင့်အညီ၊ သေခြင်းမှ၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပေါ်ထွန်းခြင်းငှါ ပြင်ဆင်သော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် စောင့်ထိန်းသော သင်တို့အဖို့ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သိမ်းဆည်းထားသော မဖောက်မပြန် မပျက်စီးနိုင်သော မပျက်စီးနိုင်သော အမွေတစ်ခုအဖြစ်သို့၊1. ဓာတ်ဆီ 1,3-5) ။
ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်း တမန်တော်ပေတရုကဆိုသည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးတရားအားလုံး၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျနော်တို့ကိုအလွန်အားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်ယခုနှငျ့အနာဂတျအတှကျမြျှောလငျ့ခပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့် ဤမျှော်လင့်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းသောစကားနှင့် အကျင့်များဖြင့် တုံ့ပြန်ရန် ဦးတည်စေသည်။ လူတွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ဖန်ဆင်းခံရတယ်လို့ ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးမှာ အခြားသူတွေအပေါ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အထင်ကြီးမှုကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို အားပေးမှု၊ ခွန်အားနှင့် မျှော်လင့်ချက်တို့ကို ခံစားစေလိုပါသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၌ရှိသောမျှော်လင့်ချက်ကို အာရုံမစိုက်ပါက၊ လူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံမှုသည် အခြားသူများကို စိတ်ပျက်အားလျော့စေခြင်း၊ မနှစ်သက်ခြင်း၊ တန်ဖိုးမထားခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါက တခြားသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုတိုင်းကို တကယ်စဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာပါ။
ဘဝသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး အခြားသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင်လည်း စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။မိမိတို့၏ သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုသော မိဘများအနေဖြင့် ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက မည်သို့ဖြေရှင်းကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ရှင်၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူအနေဖြင့် အလုပ်သမား သို့မဟုတ် အလုပ်သမားတစ်ဦးနှင့် ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ခရစ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသလော။ အမှန်တရားမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားချင်းများကို ဘုရားသခင်က ချစ်မြတ်နိုးပြီး တန်ဖိုးထားကြသည်လား။
အပျက်သဘောဆောင်သောစကား၊ နှုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ မျှတမှုမရှိသော ဆက်ဆံမှုနှင့် နာကျင်စေမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် နာကျင်သည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ ငါတို့ကို ဘယ်အရာကမှ မခွဲထုတ်နိုင်တဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အမှန်တရားကို အာရုံစိုက်မထားဘူးဆိုရင်၊ အဆိုးမြင်မှုတွေကို အလွယ်တကူ စွန့်လွတ်နိုင်စေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျပြီး စိတ်ဓာတ်မကျစေပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မျှော်လင့်ချက်ရှိသော ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောမျှော်လင့်ချက်နှင့် ယင်းတို့၌ရှိနိုင်သည်ကို အခြားသူများကို သတိပေးနိုင်သည်– “သခင်ခရစ်တော်ကို သင်တို့စိတ်နှလုံး၌ သန့်ရှင်းစေကြလော့။ သင့်၌ရှိသောမျှော်လင့်ချက်အတွက် စာရင်းပေးရန် တောင်းဆိုသူတိုင်းအား ဖြေကြားရန် အချိန်တိုင်း အသင့်ရှိပါ ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှု နှင့် ကောင်းသောသြတ္တပ္ပစိတ်ရှိပါ ၊ သို့မှသာ သင့်အား ဆဲရေးသည့်သူများကို မြင်သောအခါ အရှက်ကွဲစေမည် ။ ခရစ်တော်၌ ကဲ့ရဲ့ခြင်းငှါ သင်၏ကောင်းသောအကျင့်၊1. ဓာတ်ဆီ 3,15-16) ။
ဒါဆို ငါတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အား သခင်ယေရှု၌ ပေးဆောင်ခဲ့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့နေထိုင်ပုံက ဒီလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ ကြင်နာသောမေတ္တာကို လက်ခံရရှိသူများဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကိုချစ်ပြီး အဆုံးမရှိသောအားပေးမှုနှင့် သေချာသောမျှော်လင့်ချက်ကို ပေးသည်- “ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့ကိုချစ်၍ ထာဝရနှစ်သိမ့်မှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်ကောင်းတို့ကို ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် နှစ်သိမ့်တော်မူပါစေသော။ ကောင်းသောအလုပ်နှင့် စကားတိုင်း၌ သင်၏စိတ်နှလုံးကို ခိုင်ခံ့စေလျက်၊2. သက် 2,16-17) ။
ကျွန်ုပ်တို့၌ကျိန်းဝပ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အကူအညီဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၌ရှိသောမျှော်လင့်ချက်ကို နားလည်ယုံကြည်ရန် သင်ယူကြသည်။ ပေတရုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခိုင်ခံ့မြဲမြံမှုကို မဆုံးရှုံးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တိုက်တွန်းသည်– “ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် သိကျွမ်းခြင်း၌ တိုးပွားပါစေ။ ယခုမှစ၍ ထာဝရဘုန်းကြီးတော်မူပါ။ (2. ဓာတ်ဆီ 3,18).
Les Miserables ဂီတ၏အဆုံးတွင် Jean Valjean သည် "ငါဘယ်သူလဲ" သီချင်းကို သီဆိုခဲ့သည်။ သီချင်းတွင် စာသားပါရှိသည်- “သူ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါ မျှော်လင့်ချက်ပေးတယ်။ ကျော်လွှားနိုင်စေရန် ခွန်အားပေးတော်မူ၏။” ဤစကားများသည် ရောမမြို့ရှိ ယုံကြည်သူများထံ ပေါလု၏စာမှ ဆင်းသက်လာသလားဟု သံသယဖြစ်နိုင်သည်– “မျှော်လင့်ချက်၏ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းအပေါင်းနှင့် ပြည့်စေတော်မူသဖြင့်၊ သို့မှသာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် မြော်လင့်ခြင်း၌သာ၍ကြွယ်ဝလာမည်အကြောင်း၊ ” (ရောမ ၁5,13).
ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာ သတင်းစကားကြောင့်၊ ယေရှု၏အမြင့်ဆုံးသောမေတ္တာတော်အပေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းသည် ကောင်း၏– “ဘုရားသဏ္ဍာန်ရှိသူသည် ဓားပြတိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မမှတ်ယူဘဲ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် လွတ်စေပြီး အစေအပါး၏ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ခံယူ၍ လူကဲ့သို့ အသွင်အပြင်ဖြင့် လူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်” (ဖိလိပ္ပိ၊ 2,6-7) ။
ယေရှုသည် လူဖြစ်ရန် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအား ကိုယ်တော်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်ပြည့်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအား ကြင်နာစွာကျေးဇူးဆပ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
Robert Regazzoli မှ